Wuu Ka Xariifsan Yahay Cristiano Ronaldo Iyo Neymar Jr-Trent - Jubbaland TV
By admin October 23, 2018 241
Da’yarka xulka qaranka England iyo kooxda Liverpool ee Trent Alexander-Arnold ayaa si layaableh boos joogto ah uga samaystay shaxda kooxda Jurgen Klopp ee Reds tan iyo xili ciyaareedkii hore wuxuuna isaga oo 19 sano jir ah uu awooday in uu finalkii UEFA Champions League ee xili ciyaareedkii hore uu si toos ah uga hor yimid Cristiano Ronaldo halka uu sidoo kale xili ciyaareedkan ka hor yimid Neymar Jr.
Trent Alexander-Arnold ayaa loo xil saaray in uu joojiyo Cristiano Ronaldo iyo Neymar Jr wuxuuna si buuxda ugu guulaystay in labada xidigba ay garoonka ka baxeen iyaga oo aan hal gool dhalin laakiin Trent Alexander-Arnold ayaa shaaciyay xidigii ugu adkaa ee uu kubbada cagta kaga hor yimid.
Alexander-Arnold oo difaaca midig uga ciyaara Liverpool ayaa si toos ah looga hor keenay Cristiano Ronaldo iyo Neymar Jr oo booska garabka bidix uga ciyaarayay kooxahooda Real Madrid iyo PSG laakiin waxa uu amaan wayn ku helay qaabkii uu shaqadiisa uga soo baxay.
Trent Alexander-Arnold ayaa ku dooday in xidiga kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha uu ahaa xidigii ugu adkaa ee uu kubbada cagta kaga hor yimid wuxuuna tilmaamay sababta uu xaalada ugu adkeeyay ee uu dhibaatada ugala kulmay isla markaana aanu Ronaldo iyo Neymar ugala kulmin.
Wilfried Zaha ayaa ka mid ah ciyaartoyda gambiska ugu badan ee guulaysta ka sameeya Premier League isla markaana waxa uu heerkiisii ugu sareeyay ku ciyaarayay tan iyo markii uu kooxda Crystal Palace ku biiray isaga oo si wayn u soo jiitay indhaha kooxaha waa wayn ee Premier league.
Trent Alexander-Arnold oo ka jawaabaya xidigii ugu adkaa ee uu ka hor yimid ayaa yidhi: “Waxaan sheegi karaa in Zaha uu ahaa kii ugu adkaa, waana kaliya ciyaar yahanimadiisa. Isaga kama qaadi kartid kubbada, aad ayay u adag tahay in aad taakal ku samayso, wuu deg deg badan yahay oo uu xirfad badan leeyahay, goolal ayuu dhalin karaa oo uu abuuri karaa, waa kulan ku guulayste”.
Intaa kadib Alexander-Arnold ayaa ka hadlay sida Ronaldo iyo Neymar oo uu ka horyimid ayna ugu adkaan wuxuuna yidhi: “Neymar iyo Ronaldo waxaad arki kartaa in ay yihiin ciyaartoy aad u maskax fiican, dadku waxay yaqaanaan qaabka ay caanka ku yihiin iyo dhaq dhaqaaqooga kala duwan, laakiin marnaba inta ugu badan kubbada nagumay helayn anaga”.
Ugu danbayn Alexander-Arnold ayaa tilmaamay in Zaha aanu gaadhin heerka Ronaldo iyo Neymar balse uu ahaa xidigii ugu adkaa ee uu soo wajahay wuxuuna yidhi: “Xaqiiqdii Zaha ma aha heerka Ronaldo iyo Neymar, laakiin aniga ahaan maalintii Zaha waxay ugu dhawaan ahayd tii ugu adkayd”.
Weeraryahanka Tottenham Hotspur Fernando Llorente: “Waxaan raba inaan dib ugu laabto kooxdeedii hore Athletic Bilbao”
Kulamada ugu xiisaha badan ee galabta iyo Caawa laga Ciyaari doono Yurub, Chelsea oo aan Premier League Ciyaari doonin iyo